Yimiphi imithombo engaphenduliwe emuva kwe-Backlinko?
Ama-Backlink aqhubeka nokusebenzisa izwe ledijithali, naphezu kwezihloko ezithile kanye nabakwa-webmasters basitshela ezinye izinto ngabo. Eqinisweni, izifundo zokugcina ze-search engine zibonisa ukuthi ama-backlink angenye yezici ezibaluleke kunazo zonke ze-Google nezinye izinjini.
Uma kuziwa ukuxhumanisa isakhiwo, kunezindlela eziningi ezivivinywe-neqiniso ezitholakalayo. Abanye babo balandela iziqondiso ze-Google, kanti abanye bephula. Ezinsukwini zethu, ezinye zezindlela zokukhiqiza izixhumanisi ziba nomphumela ophansi ezinsukwini zethu (f. e - blitz montage gmbh glattbrugg ch. ukuthunyelwa kwabavakashi noma ukubeka amazwana emuva kwe-backlink). Noma kunjalo, kusekhona izindlela eziningi ezingaziwa noma ezingaphansi komhlaba ukuthi ungathola kanjani ama-backlink aphezulu aphezulu.
Kulesi sihloko ngizokwabelana nawe ngamasu amaningana wokuxhumana angaphansi komhlaba, amanye awo engiwabolekile kumnikazi weBrian Dean Backlinko. Ake sihlolisise ngamunye wabo.
Izindlela zokuthola ama-backlink ngenxa ye-Backlinko methodology
Amasu okuxhumanisa umphakathi
ukuthola izixhumanisi zangaphandle ezivela kuma-social media. Ngokuya ngale ndlela, kufanele wabelane ngokuqukethwe okufanele futhi uzalise okuqukethwe okwabelwana kakhulu. Ngemuva kwalokho, udinga ukufinyelela kubasebenzisi abaqale babelane ngalokhu okuqukethwe futhi banikeze ngocezu olusha noma olusha.
Izindlela zokwakha isixhumanisi se-Skyscraper
Le nqubo yokwakha isixhumanisi se-Skyscraper yasungulwa ngu-Brian Dean. Kwamsiza ekwandiseni umgwaqo wakhe ohamba phambili ngezingaphezu kuka-400%. Ngokusho ngale ndlela, udinga ukukhomba amagama asezingeni eliphansi lokusesha futhi uthole ucezu lokuqukethwe okuthandwa phakathi kwabasebenzisi. Ngemuva kwalokho, kufanele ubhale kangcono ngemibandela efanayo yokusesha. Qinisekisa, inguqulo yakho entsha yokuqukethwe ihlukile futhi isekelwe ekucwaningweni. Ukuze uqedele le nqubo yokwakha isixhumanisi, udinga ukugqugquzela lokhu okuqukethwe okubuyekeziwe kumithombo yezenhlalo nomgomo ezinye zezizinda eziphezulu ze-PR ekugcineni zixhumanisa kuwe.
Ubufakazi buxhumanisa namasu wokwakha
Ubufakazi buwusizo kakhulu kunoma yiziphi amabhizinisi njengoba kubonisa amakhasimende ukwaneliseka kumikhiqizo noma izinsizakalo inkampani inikeza. Abaphathi bewebhu bawafuna njengoba beyazi ukuthi yiziphi izinzuzo abangaziletha ezitolo zabo ze-intanethi. Ngendlela enjalo, ukudala ubufakazi bakho kunikeza ithuba elihle lokuzitholela isixhumanisi esilula kodwa esigunyazayo esingenayo. Abasebenzisi bakhangisa kangcono izinkampani ezinezici ezivela kumakhasimende wangempela kunamawebusayithi abonisa ukubuyekezwa kwe-spammy (njengomthetho onjalo ubufakazi obungatholakala kalula). Ukufakaza okungokoqobo kwakho isayithi lakho elikutholile, eliphakeme lizobe lisezingeni ekhasini lemiphumela yokusesha. Ngaphezu kwalokho, kubonakala kunokwethenjelwa kwamanye amabhizinisi. Yingakho bazoxhuma kusayithi lakho ngaphandle kokucela.
Konke okudingeka ukwenze ukukhetha umkhiqizo owuthandayo kakhulu futhi uxhumane nomnikezeli wakho ukunikeza ubufakazi bakho kulokhu umkhiqizo othize. Iningi lamapulatifomu amakhulu okudayisa athola ikhasi elikhethekile lokufakazela le njongo. Yingakho kuzoba lula kuwe ukuthi uthumele ubufakazi bakho ngqo kwiwebhusayithi yabo.
Le nqubo yokwakha isixhumanisi nayo ihanjiswe ngumnikazi weBerglin Dean uBellinko.